Uyazi ukuthi kungani iBinance iyi-The Best Exchange? – Telegraph
Uyazi ukuthi kungani iBinance iyi-The Best Exchange?
Uyazi ukuthi kungani i Binance iyi-The Best Exchange?
Idiphozithi yezohwebo Binance 10 $
Ungase uzibuze ukuthi kungani i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu? Kungenxa yokuthi kungenye yezinguquko eziphumelele kakhulu futhi ezinkulu ze-imali yedatha emakethe. Olunye uhlobo lokulandela okukhulu selukhulile. UBinance wethule indlela entsha futhi entsha yokushintshanisa ezuzisa abathengisi, ephethe iBinance Coin njengophawu lwabo lwendabuko. Ekuqaleni, abaphathi be-BNB babenikezwa isaphulelo samaphesenti angama-50 ezindleko zokuthengiselana ze-BNB, behlisa uhhafu walezi zimali minyaka yonke kuze kufike ku-2020, ngaphambi kokuba zikhishwe ngo-2021.
Ngemisebenzi yayo yokufakwa ohlwini okuqondiswe kumakhasimende, okuvele kubonakale amathokheni amahle kakhulu kanye nemali edonsa imali esizeni, iBinance iya ngokuya ithandwa kakhulu ngabasebenzisi be-ICO abavikela nabatshalizimali ngezinhlelo ezingenakubalwa zomkhonyovu ezivame ukuba semapulatifomu angabandlululi kangako.
Yiziphi izici zokuhweba ezinikezwa yiBinance?
Abahwebi nabatshalizimali bawo wonke amazinga wesipiliyoni kusuka kubaqalayo kuya kochwepheshe bangasebenzisa iBinance.
Ukushintshaniswa kuhlukanisa ikakhulukazi izimfanelo zayo zokuhweba ngamaqembu amabili. Izinhloso zangaphambilini zabasebenzisi abathuthuke kancane, lezi zamuva zisebenza kakhulu futhi zakhelwe umtshali-zimali osenesikhathi.
Ngokuqinisekile uzoba nentshisekelo kulungiselelo olulula uma uyi-novice ekuhwebeni nge-idijithali yemali. Lokhu kunika amandla ukuzulazula kokushintshanisa okulula. Futhi kulula ukusebenzisa i-interface. Izakhiwo eziningi zingathengwa futhi zithengiswe ngaphandle kwenqubo yokufunda eningi ngama-cryptocurrensets ahlukile.
Noma, uzokwamukelwa ngesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esisabisa kakhulu uma ukhetha ukulungiselelwa okuthuthukile. Ngokuphambene nokufaka i-oda, le ndlela yakhelwe ukulingisa ukuhlaziywa kwezimakethe eziyinkimbinkimbi nezibikezelo.
Ukucushwa kwe-oda elikhethekile kunikeza yonke imisebenzi efanayo nenye indlela ejwayelekile, kepha ngamamephu wokuzikhethela. Inika amandla abasebenzisi ukudala amashadi wabo, amamethrikhi, ukuqagela, nemininingwane eyengeziwe. Le pulatifomu ingaqhuba okunye ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe.
Ukubuyekezwa kweBinance Exchange & Tutorial 2021: Umhlahlandlela Wabaqalayo
UBinance ukhokha isilinganiso sokuhweba esingu-0,1% kokubili kubahlinzeki bezimpahla nakubathengi bezimakethe bama-akhawunti angaphansi kwenani le-100 le-BTC, okusengomunye wabadayisi abaphansi embonini.
Kodwa-ke, i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu okuphakamisa izindlela ezimbili zokunciphisa ngandlela thile izimali zokuhweba zabahlinzeki nabaqashi ziye kufinyelela ku-0,0150% no-0,0300%.
i-binance yiyona exchange enhle kakhulu ehlukanisa uhlelo lwayo lwemali lwaba ngamanani ayisishiyagalombili ePrimiyamu ukuheha abadayisi abakhulu. Amashejuli alandelayo abekiwe ukufeza zonke izigaba ze-VIP ezilandelanayo: abadayisi kumele bahlangabezane nomsebenzi wenyanga wokuhweba omncane kanye nenani eliqondile le-binance yi-Coin engcono kakhulu yokushintshanisa.
i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu futhi ayikhokhisi imali ethe xaxa ngokufakwa kuma-cryptocurrensets. Noma kunjalo, ukudluliselwa kuzikhwama ezikhona kusengaphansi kwemali ekhokhwayo. Izindleko ziyahlukahluka kuye ngokususwa kwempahla. Imali ejwayelekile yanele kuphela izindleko ezijwayelekile zenethiwekhi.
Enye yezincazelo zempumelelo kaBinance ukuthi abasebenzisi bangabhalisela ileveli 1 ngemininingwane emincane eyenziwe yaba ngeyakho ngenxa yenqubo yabo yokuqinisekisa ekhululekile.
Ukuqinisekisa i-Level 1, i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu okuzokucela ukuthi wenze i-akhawunti futhi uhlole i-imeyili yakho ngama-akhawunti angaqinisekiswanga nsuku zonke we-2 BTC yawo wonke amazinga aqinisekisiwe 1, ngaphandle kwamadiphozithi noma imikhawulo yokuhweba.Noma isheke leleveli 1 lanele kumakhasimende amaningi, i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu okunikeza ithuba lokuthenga kufinyelele ezingeni le-2, ukuze imininingwane ethile efana negama lakho, usuku lokuzalwa, ikheli kanye ne-ID yesithombe inganikezwa ngendlela ye ipasipoti yakho, umazisi kazwelonke noma ilayisense yokushayela.
Umkhawulo wakho wansuku zonke wokusebenzisa imali uguqulwa ube yi-100 BTC ngemuva kokuthi izivivinyo ezingeni 2 seziphothuliwe. Futhi, inani ongalifaka noma ukuhweba lihlala lingenamkhawulo. Qaphela ukuthi ukuhlolwa kobunikazi kuyadingeka ukuthenga ama-cryptocurrensets ngababili abasontekile ngekhadi lasebhange noma lesikweletu.
Ingabe ukuthengiselana nge-Binance kuphephile?
Ngokubhala, uBinance akakaze ephule ukuphepha ngenxa yezinhlelo eziqinile zokuphepha, ngokwengxenye ngenxa yokuhwebelana okukhulu kwe-cryptocurrency. I-Binance ibonakala isebenza kanzima kakhulu ukuvimbela ukuhlaselwa okungenzeka kwizimpahla zabasebenzisi bayo.
Ngokumangazayo nokho, iBinance ayikhulumi ngokugcinwa kwesikhathi eside kwezimali zayo zabasebenzisi ”indlela ephephe kunazo zonke yokuvikela izimali zabasebenzisi. i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu, futhi inikezela ngezici ezahlukahlukene zokuphepha kwamakhasimende ngaphezu kwalokhu kubuyiselwa emuva kwesikhashana. Ama-akhawunti we-Binancing cishe awaphumeleli uma evikelwe kahle.
Okokuqala, ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili kuyasetshenziswa-ngemuva kokufaka iphasiwedi yakho, i-SMS, kanye / noma isheke lokuqinisekisa lisetshenziswa njengolwelwesi lwesibili lokuphepha. Ngakho-ke, i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu okufanele kuthumele i-imeyili yokuqinisekisa ngokususwa ngakunye. Kuyasiza ukuvimbela abalingisi ababi ekufinyeleleni iziqinisekiso zezezimali zomsebenzisi ekwebeni izimali zabasebenzisi. Umsebenzisi kufanele aqinisekise ukutholwa kwe-imeyili, kuze kube yilapho imali ihanjiswa esikhwameni sangaphandle ngefomu elibophezelayo.
Kuhlanganiswe nokuqinisekiswa okuphindwe kabili, lokhu kusho ukuthi noma yimuphi umgqekezi uzokwazi ukufinyelela i-akhawunti yakho, ikheli le-imeyili, nedivayisi yeselula ukukhipha imali inselelo enzima.
Ukufakwa kwe-Binance nokukhanselwa
I-Binance ayilethi idiphozi noma ukuhoxiswa njengokushintshaniswa kwemali ye-crypto. Isikhala.
Ukuhweba okuncane kwediphozithi Binance 10 $
Kodwa-ke, ihlinzeka ukubuyiselwa kwemali kwazo zonke izimali ze-idijithali ezithengiswa kuwebhusayithi. Ngalesi sici, i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu okusebenzisana nama-Twisted-pair ukuvumela inkampani ukuthi ithenge i-cryptocurrency epulatifomu.
UBinance useqalile ukushintshisana ngodade ogama lakhe linguBinance Jersey, elizosetshenziswa ngokumelene ne-Euro nePfund Sterling ekuhwebeni kwe-Ethereum neBitcoin. Njengoba lesi yisithangami esehlukile, lokhu kushintshana ngeke kuvikelwe yilesi sifundo.
i-binance ingukushintshaniswa okuhle kakhulu okuwukushintshaniswa okuvelele kubo bobabili abaqalayo nabahwebi abaphambili ekuhwebeni nge-cryptocurrency abafuna ukubhekana nohlu olubanzi lwezimpahla zedijithali ngamanani aphansi kakhulu.Ukuhweba kuphakathi kwezinhlelo ezihamba phambili maqondana nokuhlukahluka kwempahla, nomthamo ophakeme kakhulu wanoma yikuphi ukushintshaniswa okwenziwayo njengamanje futhi njengenye yezindawo ezimbalwa ezisekela ukuhweba ngemali engaguquguquki.